HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaDiyaar garowga Barafka ee Qorraxda
15 / 01 / 2020 54 Sakarya, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
aycicegi dooxada baaskiilka oo diyaar u ah horyaalnimada
Duqa magaalada Ekrem Yüce, oo indho indhayn ka sameeyay Sunflower Bicycle Valley, oo martigalin doona 2020 World Mountain Bike Marathon Championship, ayaa yidhi, “Waxaan ahmiyad weyn u leenahay horyaalnimada oo gacan ka geysan doonta kobcinta dalkeena iyo magaaladeena. Waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysan doonno horyaalnimada barnaamij uu ka qeybgalay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Hamdolsun Sakarya wuxuu diyaar u yahay horyaalnimada. Cidna ha u ballan qaadin markay jadwalka kalandarku muujinayo Oktoobar. Aynu ku kulanno Qorrax-ka-sooseedka Qorraxda ee Sunflower.
Duqa magaalada Sakarya Ekrem Yüce, 2020 World Mountain Bike Marathon Championship ayaa martigelin doonta Sunflower Bicycle Valley, oo indha indheyn lagu sameeyay. Madaxweynaha Ekrem Yüce, oo helay macluumaadka ku saabsan qodobka ugu dambeeya ka hor horyaalnimada, ayaa sheegay inay ku tartami doonaan horyaalnimada sida ugu wanaagsan adduunka, iyo in Sunflower Bicycle Valley ay diyaar u tahay hay'adda weyn.
Dooxada baaskiil qorrax ka sameysan oo diyaar u ah horyaalnimada
Madaxweyne Ekrem Yüce ayaa sheegay in horyaalka ay Sakarya ku marti qaadi doonto iyada oo loo marayo xilka madaxweynaha ay ka mid tahay ururada yar yar ee baaskiillada adduunka. Muhiimad weyn ayaan u leenahay horyaalnimada oo gacan ka geysan doonta kobcinta dalkeena iyo magaaladeena. Waxaan sidoo kale baaritaannada ku sameynay Qorraxleyda Qorraxda ee Sunflower, oo ah mid ka mid ah tas-hiilaadka casriga ee waddankeenna ugu tirada badan Yurub, oo aan helnay macluumaad ku saabsan diyaarinta. Hamdolsun Sakarya wuxuu diyaar u yahay horyaalnimada ”.
Cinwaanka Baaskiilka Baaskiilka ee Qorraxda bishii Oktoobar
Isagoo sheegay inay muhiimad weyn siinayaan horyaalnimada ku dhawaaqi doona magaca dunida, Duqa magaalada Ekrem Yüce wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey sidan: “Tartanka wuxuu gacan ka geysan doonaa oo keliya magaaladeena iyo sidoo kale hormarinta waddankeena. Taageerayaasha isboorti ee ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah ayaa u imaan doona hay'adda caalamiga ah halka Sakarya lagu soo bandhigi doono shaashadda iyada oo lala socdo telefishanno toos loo daawado. Aad ayaan u faraxsanahay oo faraxsan. Waxaan rajeynayaa in 2020 ay noqon doonto sanadka Sakarya duur kasta. Waxaan rabaa inaan waco mar kale; Cidna ha u ballan qaadin markay jadwalka kalandarku muujinayo bisha Oktoobar. Aynu ku kulanno Qorraxda Qorraxda Sunflower. ”
Asaasiga Dooxada Sunflower iyo Island of Bicycle
2020 World Mountain Bike Maaraton Championship
Horyaalka Bike Marathon World Mountain